बालबालिका तथा युवा प्रतिभाको लागि रु. १० लाख अवार्ड CashNep ले प्रदान गर्ने – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७७ चैत २६ गते ६:३२ मा प्रकाशित
CashNep-क्यासनेप भनेको के हो?
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त साथै नेपाल कै पहिलो Online Earning Company हो । बालबालिका तथा युवाहरूमा भएका प्रतिभालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म पहिचान गराउने छ भने ती प्रतिभालाई बजारीकरण गर्नको लागि निःशुल्क अनुदानको उपलब्ध गराउने छ ।
CashNep-क्यासनेपमा के के पुरस्कार हरेका छन् ?
देश भरी छरेर लुकेका प्रतिभाहरूको खोजतलास गरी ती प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने छ । हरेक महिना उत्कृष्ट प्रतिभालाई नगद राशि रु. ५०,००० सहित प्रमाणपत्र दिइने छ भने हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट एक जना रु. १० लाख नगद राशि सहित गोल्ड प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । CashNep-क्यासनेपको केन्द्रीय विज्ञ समिति रहेका छ जसमा २० जना हरेक विधाको प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँहरूले ती प्रतिभालाई Verify गरे पछि CashNep-क्यासनेपले अवार्ड उपलब्ध गराउने छ ।
CashNep-क्यासनेपको मुख्य योजना के के हुन्?
विकसित मुलुकका बालबालिका तथा युवाहरू ठुला-ठुला कम्पनीको Founder/CEO रहेका छन् भने हाम्रो देशमा बालबालिकाहरू सह-चालक र युवाहरू खाडी मुलुक प्रस्थान हुन बाध्य रहेका छन् ।
हामीले पनि विकसित मुलुकका नागरिकबाट केही सिक्नु पर्ने र अब बालबालिका तथा युवाहरूलाई पनि स्वदेशमै कम्पनीका Founder/CEO बनाउन प्रोत्साहन निःशुल्क लगानी साथै पुरस्कार व्यवस्था गर्ने छ । कसैसँग भएका प्रतिभा खेर नजाने आर्थिक तथा भौतिकका कारणले त्यस्ता प्रतिभालाई संरक्षण तथा अनुदान दिई ती प्रतिभालाई बजारीकरण गरी राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पुराउने र स्वदेशी ब्रान्ड बनाउने मुख्य उद्देश्य र योजना हरेका छन् ।
CashNep-क्यासनेप कसरी प्रतिभालाई अवार्ड साथै लगानी गर्ने छ ?
CashNep-क्यासनेपले अब स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा हरेका प्रतिभाको खोजतलास गरी ती प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने छ भने CashNep-क्यासनेपको केन्द्रीय विज्ञ समिति जहाँ २० जना हरेक विधाका प्रा.डा. हरू हुनुहुन्छ हामी सम्बन्धित विज्ञलाई सिफारिस गर्ने छौँ उहाँहरूले त्यो प्रतिभा Genuine छ भन्ने लाग्यो भने CashNep-क्यासनेपलाई अवार्ड साथै लगानीको लागि सिफारिस गर्नु हुनेछ अनि CashNep-क्यासनेप ले त्यहीँ अनुसारको आवश्यक कुराहरूको लागि पर्ने छ Step-Step देखि बजारीकरण सम्म आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने छ । पेटेन्ट, निजको नाममा कम्पनी बनाएर प्रतिभावान् बालबालिका तथा युवाहरूलाई यसरी Founder/CEO बनाइने छ।
CashNep-क्यासनेपबाट प्रयोगकर्ताहरूले कसरी पैसा कमाउन्छन ?
CashNep-क्यासनेप Web र Mobile App बाट चल्ने छ । सुरुमा यो Register गर्दा प्रयोगकर्तालाई रु. ५०० बोनस प्राप्त हुने छ भने Each Referral Bonus रु. १० पुनः प्राप्त हुने छ unlimited earning हुनेछ Referral बाट । अन्लाईन मै बसेर CashNep-क्यासनेप चलाउँदा प्रति दिन न्यूनतम रु.४०० कमाउन सकिने छ । आफूले कमाएको पैसा तुरुन्तै आफ्नो बैङ्क खाता र अन्य प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्न पाउने छन् जस्तै Recharge, Ticket, Bill इत्यादि ।
CashNep-क्यासनेपमा कति category हरेका छन् पैसा कमाउनको लागि?
CashNep-क्यासनेपमा ३१ भन्दा बढी categories हरेका छन् । जस्तैः Merry, PTC, Study Room, I Can Do, Freelancer, Financial Record इत्यादि।
CashNep-क्यासनेप प्रयोग गर्नको लागि के निःशुल्क छ?
CashNep-क्यासनेप जुनसुकैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छन् नेपाल भित्र । यसमा भएका ३१ ओटा सेवा लिनको लागि पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क रहेको छ । नयाँ प्रयोगकर्ता सुरुमा रजिस्टर गर्दा बरु CashNep-क्यासनेपले रु. ५०० बोनस दिनेछ।
CashNep-क्यासनेप किन कम्पनीमा दर्ता गर्नु भयो?
CashNep-क्यासनेप कम्पनीमा दर्ता भएता पनि यसले गर्ने सत प्रतिशत सबै Non-Profit NGO संस्था जस्तै रहेको छ। CashNep-क्यासनेप ले विज्ञान तथा प्रविधिमा अनुसन्धान गर्ने छ भने ती प्रतिभा तथा अन्वेषणलाई बजारीकरण गर्ने हुँदा यसलाई कम्पनीमा दर्ता गरेको हो ।
कसरी विद्यार्थीहरूले ज्ञान सिक्दा पनि पैसा कमाउन सक्छन्?
CashNep-क्यासनेप विद्यार्थीहरूका लागि Study Room हरेको छ । जहाँ अध्ययन विषयमा बहस हुने छ । कुनै पनि आफूले सिकेका कुराहरू Study Room मा गएर post/upload गर्न पाउने छन् त्यो पोस्ट कति जनाले पढे/हेरे त्यहीँ अनुसार CashNep-क्यासनेपले पैसा जम्मा गर्दिनेछ निज प्रयोगकर्ताको खातामा । यो विधि विश्वमा कतै छैन ज्ञान लिँदा पनि पैसा आउने र दिँदा पनि पैसा आउने एउटा मात्र हो CashNep-क्यासनेप ।
अनुसन्धानकर्ता, भिजनवरीहरुको लागि के के छन्?
CashNep-क्यासनेप मा यस्ता व्यक्तिहरूको लागि I Can Do हरेको छ जसमा हरेक प्रश्न सोधिने छ प्रयोगकर्ता आफैले पनि सोध्न पाउने छन् ।इन्नोवतिवे Mind भएकाहरूले खत्रा खत्रा Concept/ideas/ policy Create गर्ने छन् । त्यही विषयमा गहिरो बहस चल्ने छ । उत्कृष्ट प्रश्नलाई अवार्डको व्यवस्था गरेको छ भने सर्व उत्कृष्ट Solve गर्नेलाई पनि रु.१ लाख सम्मको अवार्ड दिइनेछ । नितिनिर्माण गरी राज्यलाई समेत पेस गर्ने छ ।
CashNep-क्यासनेपको Founder को हो ?
CashNep-क्यासनेप पुरै डिजाइनर, अनुसन्धानकर्ता, युवा वैज्ञानिक वसन्त कुमार शाही नेपालको अति विकट जिल्ला कर्णालीको कालिकोटको एक अति गरिब परिवारमा हुर्केका थिए । बाल्यकाल देखि नै अन्वेषण/ प्रतिभामा रुचि राख्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड समेत पाइसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि २०७४ मा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कृत तथा सम्मान समेत गरेको थियो । उनी भन्छन् मसँग प्रतिभा थिए तर अवसर(भौतिक तथा आर्थिक) गरिबीका कारणले गर्नु पर्ने गर्न सकिन । धेरै दुःख पाए अब आउने पुस्ताहरूले म जस्तै दुःख भोग्न नपरोस् । गरिबीका कारणले नै प्रतिभा लुक्न नपरोस् ती प्रतिभालाई बजारीकरण गरी राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगोस् र स्वदेशी ब्रान्डको प्रयोग गरियोस् ।
“Talent is universal but, an opportunity is not” म सधैँ यहीँ भन्ने गर्छु । मैले भोगेको वास्तविक पनि हो ।
CashNep-क्यासनेपले सामाजिक सेवामा कति खर्च गर्ने छ ?
CashNep-क्यासनेपको जम्मा आम्दानीको २० प्रतिशत बालबालिकाको प्रतिभालाई खर्च गर्ने छ भने, ३० प्रतिशत युवाहरूको प्रतिभाका लागि, २० प्रतिशत युवा उधमीको लागि खर्च गरिने छ । भने २० प्रतिशत आकस्मिक सेवाको लागि छुटाइने छ भने १० प्रतिशत CashNep-क्यासनेपको चलाउनको लागी प्रयोग गरिनेछ।
CashNep-क्यासनेप कहिले सुचारुमा आउन्छ ?
वैशाखको तेस्रो साता देखि सुचारुमा ल्याउने तीव्र गतिमा कार्य भइरहेको छ । करिब हामी अन्तिम क्षण सम्म पुगेका छौँ । एक भव्य कार्यक्रम बिच विशिष्ट व्यक्तिहरूले सुचारु गर्नु हुनेछ ।